विचार/दृष्टिकोण Archives - Page 24 of 31 - Purbeli News
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय जिम्मेवारी र चुनौतिहरू
नेपालको इतिहासमा २००७ सालको जनक्रान्तिले प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भयो । १०४ वर्षदेखिको जहानिया राणा शासनबाट देशमुक्त भयो । सरकारमा जनाताका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता भयो । राजनीतिक दल वा संघसंस्थाहरुको स्थापना भयो र तिनको क्रियाशिलताकोलागि जनतामा आधारसिला बन्याे । बिचार तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एवम राज्यका न्युनतम मुल्य मान्यताहरु सामान...
‘जब पर्खालले नछोपिने दृश्यहरु बिचारका धर्काहरुले छोपिदिन्छन तब मस्तिष्कहरु भ्रमित हुन्छन् ।’ त्यस्तै नेपालीको धर्म, कर्म र संस्कारलाई पाखा लगाएर आमा समानकी सासु आमालाई किन ढोग्ने भनेर आफुलाई अपमानित सोच्ने कलियुगका बुहारीहरु कुर्लन्छन तब सोच्नुस त्यहि नारी श्रीमानको बिस्तारामा किन जाने गर्छन ? केहि दिन अघि एक महिलाको आर्टिकल अनलाइनमा आयो मैले सासुक...
कहिले काही यस्तो संयोग हुन्छ ! जो कसैले पनि कल्पना गरेको हुदैंन । वर्तमानको परिवेशले विगतको परिवेशलाई सम्झन बाध्य बनाउँछ । इतिहासका कुनै पनि कालखण्डहरु कुनै सम्झन योग्य हुन्छन, भने कुनै कालखण्डहरु सम्झन अयोग्य हुन्छन । त्यहि मध्यको यो पंक्तिकार पनि आज विश्वको अल्पविकसित राष्ट्र र विश्वको शक्तिराष्ट्र विचको तुलना गर्न पुगेको छ । वि.स. २०१७ कुरा ...
कंक्रिट नै कंक्रिटले भरिएकाे पूर्वकाे मृत शहर (फाेटाे फिचर सहित)
मोरङ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो उखान परिवर्तन भएर हरियो बन तस्करको धन भएको लामो समय भईसक्यो । अधिकांश बन तस्करहरुले आफनो धन बनाईसकेका छन । बचेको जंगल क्षेत्रमा समेत बिभिन्न जाति र धर्मका नाममा निर्माण गरिएको कंक्रिट भवन र चिहानका कारण जंगल क्षेत्र मासिएर चिहानको शहरका रुपमा परिचित हुन थालेको छ । पुर्वी नेपालका झापा, मोरङ ,सुनसरी लगायतका ...
स्ववियुमा कस्तो उमेद्धवार हुनु पर्छ ?
स्वतन्त्र बिधार्थी युनियन सबै बिधार्थीहरुको साझा संगठन भनेर चिनिने गरेको पाईन्छ । वास्तवमा सबै बिधार्थीको हक हित र अधिकारको सुनिश्चतााका लागि लडने एक स्वतन्त्र संगठननै स्वतन्त्र बिधार्थी संगठन हो । विगत वर्ष देखी चुनाव हुन नसकेको स्वतन्त्र बिधार्थी युनियनको चुनावले यो बेलासबै कलेजहरुमा चुनावी चहलपहल सुरु भईसकेको पाउन थालिएको छ । सबै कलेजका आ आफना ...